Magacyadda musharixiinta khudbadaha maanta kahor jeedinaya xildhibaanada labada Aqal (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magacyadda musharixiinta khudbadaha maanta kahor jeedinaya xildhibaanada labada Aqal (AKHRISO)
Illaa 7 musharax oo ka mid ah musharixiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa in khudbadahooda ay kahor jeediyaan xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Mid kasta oo ka mid ah musharixiintaasi wuxuu hadli doonnaa muddo 30 daqiiqo ah oo uu fikirkiisa siyaasadeed kusoo gudbin doonno.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa inay si toos ah u bilaabato khudbadaha musharixiinta madaxweyne oo haatan qaban-qaabadeeda ay si toos ah uga socoto xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magalaada Muqdisho.
Musharaxiinta maanta khudbadaha jeedin doonna ayaa kala ah:-
1- C/naasir C/dulle Maxamed
2- C/raxmaan C/shakuur Warsame
3- C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole)
4- Cabdullaahi Cali Axmed (Caddow Cali Gaas)
5- C/laahi Ciilmooge Xirsi
6- C/laahi Cosoble Cali
7- Cali Xaaji Warsame
Musharixii 8-aad ee ahaa Injineer C/laahi Cali Xasan ayaa saakay shaaciyay inuu ka tanaasulay tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, maalinta berri ayaa la filayaa in qeybta seddaxaad ee khudbadaha musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya la qaban doonno, iyadoona ay khudbadahooda jeedin doonaan qeybta ugu dambeysay ee musharixiinta oo tiro ahaan gaaraya 8 musharax.
Tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhici doonta 8-da bishaan Febraayo.